ကော်ဒိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Fortunian) – (Holocene), 535–0 Ma
မျိုးပေါင်းစုသေး ၄-ခုမှ ကော်ဒိတ်များ၏ ဥပမာ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယားကျား (Siberian Tiger) ((Vertebrata)) တစ်ကောင်၊(Polycarpa aurata) (Tunicata) တစ်ကောင်၊ Ooedigera peeli (Vetulicolia) တစ်ကောင်၊ (Branchiostoma lanceolatum) (Cephalochordata) တစ်ကောင်။
ကော်ဒိတ် (/ˈkɔːrdeɪt/) ဆိုသည်မှာ ကော်ဒေတာ(Chordata) မျိုးပေါင်းစု (phylum) ဝင် အကောင်များ (animal) ကို ဆိုလိုသည်။ (နိုတကော့ဒ် ((notochord)) ရှိသူများကို ကော်ဒေတာ မျိုးပေါင်းစုဝင်ဟု ခေါ်ကြသည်။)
ကော်ဒိတ် မိသားစုဝင်များဆက်စပ်ပုံဇယား (family tree)
ဖန်ငါးခူ (glass catfish သို့မဟုတ် Kryptopterus vitreolus)သည် ကျောရိုး(backbone)ကို အပြင်မှ မြင်နိုင်သည့် ကော်ဒိတ်အချို့မှ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကျောရိုးအာရုံကြော(spinal cord)သည် ကျောရိုးအတွင်း၌ ရှိသည်။
ကော်ဒိတ်များသည် ၎င်းတို့ဘဝအဆင့်အချို့တွင် အောက်ပါ ခန္ဓာဗေဒသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသော တိရစ္ဆာန်လောက(Animalia Kingdom)အတွင်းရှိ မျိုးပေါင်းစုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
နိုတကော့ဒ် (notochord)။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အတွင်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အရိုးနုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတန်အသင့်မာသော အချောင်း။ ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါအမျိုးအစားတွင် ၎င်းသည် ကျောရိုး (spine) အဖြစ်သို့ ဖွံ့ဖြိုးသည်။ ရေနေမျိုးစိတ်များတွင် ၎င်းသည် အမြီးကို အားဖြည့်ခြင်းဖြင့် ရေကူးရာတွင် အထောက်အကူပြုသည်။
ကျောရိုးအာရုံကြောသွားပိုက် (dorsal neural tube)
ဖဲရဲန်ဂျီးယယ်ကွဲကြောင်း (Pharyngeal slit)
အမြီး (Post-anal tail)
အဲန်ဒိုစတိုင်လ် (Endostyle)။ လည်ချောင်းဝ (pharynx)၏ အောက်ပိုင်းနံရံ (ventral wall) တွင်ရှိသော မြောင်း (groove)။ ရေစာစစ်စားကောင်များ (Filter feeder) မျိုးစိတ်တွင် ၎င်းသည် အစာအပိုင်းအစများကို စုဆောင်းရန်နှင့် အီဆော့ဖစ်ဂပ်စ် (esophagus)သို့ သယ်သွားရန် အထောက်အကူပြုသည့် အကျိအချွဲများ သို့မဟုတ် သလိပ်ရည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အိုင်အိုဒင်းကို သိုလှောင်နိုင်ပြီး၊ ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါတို့တွင် သိုင်းရွိုက်ဂလင်း (thyroid gland) ၏ ရှေ့ပြေးဟုဆိုနိုင်သည်။
1 = ကျောရိုးအာရုံကြောတွင်
2 = နိုတကော့ဒ်
3 = ကျောရိုးအာရုံကြော
4 = အမြီး
5 = စအို
6 = အစာခြေလမ်းကြောင်း
7 = သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်
9 = လည်ချောင်းဝအပေါ်
10 = ဖဲရဲန်ဂျီးယယ်ကွဲကြောင်း (ပါးဟက်)
11 = လည်ချောင်းဝ
14 = ပါးစပ်ပေါက်
15 = gonads ((သားအိမ်) / (ဝှေးစေ့))
16 = အလင်းရောင်ခံ
17 = အာရုံကြောများ
19 = hepatic caecum ((အသည်း)ကဲ့သို့သောအိတ်)
(cephalochordate) (Amphioxus)တစ်ကောင်၏ ခန္ဓာဗေဒ သရုပ်ပြပုံ။ ကော်ဒိတ်များ၏ ဘဝအဆင့်အချို့တွင် ပိုင်ဆိုင်သော တခြား မျိုးပေါင်းစုများမှ ကွဲလွဲသည့် ခန္ဓာဗေဒသွင်ပြင်လက္ခဏာများတို့ကို စာလုံးမည်းဖြင့် ပိုထင်ရှားအောင် ပြထားသည်။
အောက်ပါ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဇယားသည် ၂၀၀၄-ခုနှစ်ထုတ် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါဆိုင်ရာ နိခါတကဗေဒစာအုပ်မှ ဖြစ်သည်။ ကျောရိုးမဲ့ ကော်ဒိတ်မျိုးပေါင်းများ (invertebrate chordate classes) မှာမူ ကမ္ဘာ့ငါးများ (Fishes of the World) စာအုပ်မှ ဖြစ်သည်။
ကော်ဒိတ်မျိုးပေါင်းစု (Phylum Chordate)
မျိုးပေါင်းစုသေး (Subphylum) Cephalochordata (Acraniata) – (lancelets၊ မျိုးစိတ် ၃၀-ခု)
မျိုးပေါင်း (Class) Leptocardii (lancelets)
မျိုးပေါင်းစုသေး (Subphylum) Tunicata (Urochordata) – (tunicates၊ မျိုးစိတ် ၃,၀၀၀-ခု)
မျိုးပေါင်း (Class) Ascidiacea (sea squirts)
မျိုးပေါင်း (Class) Thaliacea (salps)
မျိုးပေါင်း (Class) Appendicularia (larvaceans)
မျိုးပေါင်း (Class) Sorberacea
မျိုးပေါင်းစုသေး (Subphylum) Vertebrata (Craniata) (ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ (vertebrates)၊ မျိုးစိတ် ၅၇,၆၇၄-ခု)
မျိုးပေါင်းကြီး (Superclass) 'Agnatha' paraphyletic (မေးရိုးမဲ့ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ (jawless vertebrates)၊ မျိုးစိတ် ၁၀၀ ကျော်)
မျိုးပေါင်း (Class) Cyclostomata
Infraclass Myxinoidea or Myxini (hagfish၊ 65 မျိုးစိတ်)
မျိုးပေါင်း (Class) †Conodonta
မျိုးပေါင်း (Class) †Myllokunmingiida
မျိုးပေါင်း (Class) †Pteraspidomorphi
မျိုးပေါင်း (Class) †Thelodonti
မျိုးပေါင်း (Class) †Anaspida
မျိုးပေါင်း (Class) †Cephalaspidomorphi
Infraphylum Gnathostomata (မေးရိုးနှင့် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ)
မျိုးပေါင်း (Class) †Placodermi (Paleozoic armoured forms; paraphyletic in relation to all other gnathostomes)
မျိုးပေါင်း (Class) Chondrichthyes (အရိုးနု ငါးအမျိုးအစားများ (cartilaginous fish)၊ မျိုးစိတ် ၉၀၀ ကျော်)
မျိုးပေါင်း (Class) †Acanthodii (Paleozoic "spiny sharks"; paraphyletic in relation to Chondrichthyes)
မျိုးပေါင်း (Class) Osteichthyes (အရိုးမာ ငါးအမျိုးအစားများ၊ မျိုးစိတ် ၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိ)
မျိုးပေါင်းသေး (Subclass) Actinopterygii (ဆူးတောင်ဆက် ငါးအမျိုးအစားများ (ray-finned fish)၊ မျိုးစိတ် ၃၀,၀၀၀ ခန့်ရှိ)
မျိုးပေါင်းသေး (Subclass) Sarcopterygii (ဆူးတောင်ဖု ငါအမျိုးအစားများ (lobe-finned fish)၊ မျိုးစိတ် ၈-ခု)
မျိုးပေါင်းကြီး (Superclass) Tetrapoda (ခြေလေးချောင်းနှင့် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ၊ မျိုးစိတ် ၂၈,၀၀၀ ကျော်) (အောက်ဖော်ပြပါ မျိုးရိုးအခွဲများသည် Benton 2004 စာအုပ်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်အတန်းအခြေပြု လင်းနီးယပ်၏ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းစနစ် (Linnaean taxonomy)နှင့်လည်း ပေါင်းစပ်ထားကာ၊ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အရ ဆက်စပ်မှုများကိုလည်း ထင်ဟပ်ထားစေသည်။ ယခင်က ပိုမိုမြင့်မားသော မျိုးရိုးခွဲအဆင့် သတ်မှတ်ခံထားရသော်လည်း Benton သည် ဆူးတောင်ဖု ငါအမျိုးအစားများ (lobe-finned fish)မှ tetrapods များ၏ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်မှုကို ထင်ဟပ်စေရန် မျိုးပေါင်းကြီး Tetrapoda ကို မျိုးပေါင်းသေး Sarcopterygii တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။)
မျိုးပေါင်း (Class) Amphibia (ကုန်းတစ်ပိုင်း ရေတစ်ပိုင်းသတ္တဝါ၊ မျိုးစိတ် ၈,၁၀၀ ကျော်ရှိ)
မျိုးပေါင်း (Class) Sauropsida (တွားသွားသတ္တဝါများ(ငှက်များအပါအဝင်၊ မျိုးစိတ် ၁၉,၀၀၀ကျော် – ငှက်မျိုးစိတ် ၁၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် တွားသွားသတ္တဝါ မျိုးစိတ် ၉,၅၀၀ ကျော်)
မျိုးပေါင်း (Class) Synapsida (နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ မျိုးစိတ် ၅,၇၀၀ ကျော်)
↑ Nielsen, C. (July 2012). "The authorship of higher chordate taxa". Zoologica Scripta 41 (4): 435–436. doi:10.1111/j.1463-6409.2012.00536.x.
↑ "A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group" (2014). BMC Evolutionary Biology 14. doi:10.1186/s12862-014-0214-z. PMID 25273382.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Ruppert, E. (January 2005). "Key characters uniting hemichordates and chordates: homologies or homoplasies?". Canadian Journal of Zoology 83: 8–23. doi:10.1139/Z04-158. Retrieved on 2008-09-22. Archived9December 2012 at Archive.is
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Evolution and Development of the Chordates: Collagen and Pharyngeal Cartilage" (March 2006). Molecular Biology and Evolution 23 (3): 541–549. doi:10.1093/molbev/msj055. PMID 16280542.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Benton, M.J. (2004). Vertebrate Palaeontology, Third Edition. Blackwell Publishing. The classification scheme is available online Archived 19 October 2008 at the Wayback Machine.
↑ Benton၊ Michael J. (2014)။ Vertebrate Palaeontology (4th ed.)။ John Wiley & Sons။ ISBN 978-1-118-40764-6။
↑ Nelson, J. S. (2006)။ Fishes of the World (4th ed.)။ New York: John Wiley and Sons, Inc။ ISBN 978-0-471-25031-9။
↑ ASW Home။ American Museum of Natural History, New York။
↑ Reptiles face risk of extinction (15 February 2013)။ 17 September 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Study Doubles the Estimate of Bird Species in the World။ Amnh.org။ 2018-10-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော်ဒိတ်&oldid=716210" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။